नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीलाई पत्रः एमसिसीका सम्बन्धमा किन नेपालका नेताहरु र्‍याल काढेर बसेका?
विजयराज गिरीः प्रधानमन्त्री ज्यू नमस्कार,
तपाइसँग प्रत्यक्ष भेट नभए पनि जुन नाकाबन्दीका बेला देखाउनु भएको हिम्मतले तपाइको म ठूलो समर्थक भए । तपाई र मेरो विचारधारा नमिल्नसक्छ । तर, राष्ट्रपति भएको मान्छेसँग विचारधारा मिल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, म लगायत विदेशमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरुले बुझ्न नसकेको कुरा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) देशको हितमा छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै किन नेपालका थुप्रै नेताहरु र्‍याल काढेर बसेका छन्? तपाइलाई म के अवगत गराउन चाहन्छु भने हिजो महाकाली र कोशी सम्झौता गर्दा पनि तपाइहरुले जनतालाई ढाँट्नु भएको थियो । जुन आज जनताले दुःख भोगिरहेका छन् । हुन त कोशी हाम्रै होनि र महाकाली पनि हाम्रै हाे । तर, नियन्त्रण सबै दिल्लीकै हातमा छ । जब असार–साउन आउन थाल्छ जनतालाई चैत, बैशाखबाटै चिन्ता लाग्न सुरु भइहाल्छ । किनभने साउन, भदौको त्यो भेललाई दिल्लीले बन्द गरिदिन्छ । र, हाम्रा तराइका दाजुभाई बर्सेनी डुवानको मारमा पर्छन्, घरवार विहिन हुन्छन् ।
यो सबै किन भनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री ज्यू मैले महाकाली नदी आसपासका मान्छेको पिडा राम्रोसँग बुझेको छु । उनीहरुको पिडा नजिकबाट देखेको पनि छु । हामीलाई राम्रोसँग थाह छकि हाम्रो मुलुक आर्थिक हिसाबले भेरै पटाडि छ । यसको मतलब यो होइन कि फाइदा हुन्छ भन्दैमा आफ्नो आमाको छातीमा बुट बजारेको कदापी हेर्न मन छैन ।
तपाइलाई हेक्का रहोस् देशलाई समृध बनाउनु छ भने पहिला देश भित्रका भष्ट्रहरुलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुहोस् । पम पनि ठोकुवा गर्न चाहन्छु कि सबैभन्दा भ्रष्ट, ज्यानमारा र राष्ट्रघातीहरु तपाइकै पालाको सरकारमा छन् । एमसिसीको पैसाका लागि र्‍याल काढेर बस्नुभन्दा पहिला एनसीएलदेखि थुप्रै अरु संस्थाबाट लिने पैसा उठाउनुहोस् । यदि त्यति गर्दा नि पुगेन छ भने हामी विदेशमा बस्ने नेपाली पैसा उठाएर पठाउने छौं । यदि यस्तो गर्नु भएछ भने मैले आफ्नो खुसीले सरकारलाई ३० देखि ५० लाखसम्म चन्दा दिनेछु । म गरिव भएर के हुन्छ र यदि मेरो देश समृद्ध भन्छ भने । लेखक गिरी हाल रोजगारीको शिलशिलामा यूएई (दुबई) मा छन् ।
केपी शर्मा ओली एमसिसी विजयराज गिरी